Afak’omaly alahady sahabo tamin’ny 10 ora lasataka fahefany maraina teo eo no nitrangan’ny fipoahana avy ao anaty motera. Voromby hihazo an’i Istanbul, Renivohitr’i Torkia ity saika niharam-boina ity. Airbus A 330 an’ny fikambanam- pitanterana ana habakabaka Turkish Company mitondra ny laharana TK 6506TC-LDS izay nivoahana afo narahina setroka mainty tsy nifankahitana nivoaka avy tao amin’ny faritra an-kavia ary narahina fipoahana izany. Fiaramanidina mpitatitra entana ity an’ny Turkish Company Cargo izay niheren-doza ity. Nandray fepetra avy hatrany ny tompon’andraikitra voakasika, najanona ilay fiaramanidina ka foana ny sidina. Araka ny fampitam-baovao azo avy amin’ny zandary eo Ankadilalana Mahamasina, vosoroka tanteraka ny loza, tsy nisy ny naratra na ny aina nafoy. Tsy nahitana fahasimbana tanteraka sy fahapotehana fiaramanidina kosa ankoatra ny panina ao anaty motera izay namoaka io setroka mainty tsy nifankahitana io narahina fipoahana tao anatiny. Efa nandeha ny feo teny Ivato sy ny manodidina fa nisy trangana fampihorohoroana ka nisahotaka izay tsy izy ireo mpandeha. Araka ny vaovao ofisialin’ny kaompanian’ny zandary miasa eny amin’ny Seranam-piaramanidina, efa milamina tanteraka ny faritra, amin’ny fotoana hanoratana ny vaovao.